बाइबलका कथाहरू: येशू बगैंचामा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
माथिल्लो तलाको कोठाबाट निस्कनुभएपछि येशू आफ्ना प्रेरितहरूसित गेतसमनीको बगैंचामा जानुहुन्छ। उहाँहरू पहिले पनि यो ठाउँमा आइरहनुहुन्थ्यो। बगैंचामा पुगेपछि येशूले चेलाहरूलाई जागा बस्नू र प्रार्थना गर्नू भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अलि पर भुइँमा घोप्टो परेर उहाँ प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ।
पछि येशू प्रेरितहरू भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ। तिम्रो विचारमा उनीहरू के गरिरहेका होलान्? उनीहरू त भुसुक्क निदाएछन्! येशूले उनीहरूलाई जागा बस्नू भनेर तीन पटक भन्नुहुन्छ। तर तीनै पटक उनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनुहुन्छ। अन्तमा येशू यसो भन्नुहुन्छ: ‘यस्तो बेला पनि तिमीहरू कसरी सुत्न सकेको होला? अब मलाई मेरा शत्रुहरूको हातमा सुम्पिने बेला आइसक्यो।’
ठीक त्यही बेला एउटा भीड आउँदै गरेको आवाज सुनिन्छ। हेर त! मान्छेहरू तरबार अनि लठ्ठी बोकेर पो आउँदैछन्! उनीहरूको हातमा राँको पनि छ। भीड अलि नजिक आइसकेपछि एक जना मान्छे अघि बढेर येशूको छेउमै आउँछ। उसले के गर्छ, चित्रमा हेर त। हो, उसले येशूलाई म्वाइँ खान्छ। त्यो मान्छे यहूदा इस्करयोती हो! तर उसले किन येशूलाई म्वाइँ खाएको?
येशूले उसलाई सोध्नुहुन्छ: ‘यहूदा, तिमी मलाई म्वाइँ खाएर धोका दिन्छौ?’ हो, त्यो म्वाइँ वास्तवमा संकेत थियो। किनकि यहूदाले म्वाइँ खाएपछि उसित आएको भीडले येशू को हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने थियो। त्यसपछि उहाँलाई पक्रन उनीहरू अघि बढ्छन्। तर पत्रुस येशूलाई लैजान दिन मान्दैन। उसले आफूले भिरेको तरबार निकालेर नजिकैको मान्छेलाई आक्रमण गर्छ। झन्डै त्यो मान्छेको टाउको छिनेको! उसको टाउको त बच्छ तर दाहिने कान भने च्वाट्टै काटिन्छ। तर येशूले उसको कान छोएर निको पार्नुहुन्छ।
त्यसपछि येशूले पत्रुसलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘तिम्रो तरबार त्यसकै ठाउँमा राख। के म आफ्नो बुबालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र? के उहाँले मलाई बचाउन हजारौं स्वर्गदूत पठाउन सक्नुहुन्न र?’ हो, उहाँले सक्नुहुन्छ! तर येशूले स्वर्गदूतहरू पठाइदिनोस् भनेर परमेश्वरलाई बिन्ती गर्नुहुन्न। किनकि उहाँका शत्रुहरूले लैजाने बेला भइसक्यो भनेर उहाँलाई थाह छ। उहाँ उनीहरूसँग चुपचाप जानुहुन्छ। अब येशूलाई के हुन्छ, अर्को कथा पढेर हेरौं।
मत्ती २६:३६-५६; लूका २२:३९-५३; यूहन्ना १८:१-१२.
माथिल्लो कोठाबाट निस्कनुभएपछि येशू आफ्ना प्रेरितहरूसित कहाँ जानुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
प्रेरितहरू बसेको ठाउँमा फर्कनुहुँदा येशूले उनीहरू के गरिरहेका भेटाउनुहुन्छ र यस्तो कति पटक हुन्छ?
बगैंचामा को पस्छन् अनि यहूदा इस्करयोतीले के गर्छ, चित्र हेरेर बताऊ।
यहूदा किन येशूलाई म्वाइँ खान्छ र पत्रुसले के गर्छ?
येशू पत्रुसलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँले किन परमेश्वरलाई स्वर्गदूतहरू पठाइदिन बिन्ती गर्नुभएन?
मत्ती २६:३६-५६ पढ्नुहोस्।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सल्लाह दिनुभएको तरिका आज मसीही प्राचीनहरूको लागि किन राम्रो उदाहरण हो? (मत्ती २०:२५-२८; २६:४०, ४१; गला. ५:१७; एफि. ४:२९, ३१, ३२)
अरू मानिसमाथि हतियार उठाउने सम्बन्धमा येशूको दृष्टिकोण कस्तो थियो? (मत्ती २६:५२; लूका ६:२७, २८; यूह. १८:३६)
लूका २२:३९-५३ पढ्नुहोस्।
गेतसमनीको बगैंचामा येशूलाई बल दिन स्वर्गदूत आउनुको अर्थ येशू आफ्नो विश्वासमा ढलपल हुनुभयो भन्न खोजिएको हो कि? व्याख्या गर्नुहोस्। (लूका २२:४१-४३; यशै. ४९:८; मत्ती ४:१०, ११; हिब्रू ५:७)
यूहन्ना १८:१-१२ पढ्नुहोस्।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई विरोधीहरूको हातबाट कसरी जोगाउनुभयो र यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (यूह. १०:११, १२; १८:१, ६-९; हिब्रू १३:६; याकू. २:२५)